Nepali Rajneeti | भारतको सर्वोच्चले मुम्बईको अक्सिजन व्यवस्थाको मोडेल हेरेर आदेश दिई सक्यो,हामी शुरूवातमा नै चुकिसक्यौं,ढिला नगरौं!
भारतको सर्वोच्चले मुम्बईको अक्सिजन व्यवस्थाको मोडेल हेरेर आदेश दिई सक्यो,हामी शुरूवातमा नै चुकिसक्यौं,ढिला नगरौं!
जेठ १, २०७८ शनिबार २०९ पटक हेरिएको
पत्रकार दिपक बोहरा,काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले देशभर मुम्बई मोडल लागू गरेर अ’क्सिजनको व्यवस्थापन गर्न आदेश नै दियो । मुम्बईले नमुना अक्सिजन व्य’वस्थापनका लागि मुख्यत: ५ काम गरेको रहेछ : १) कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमै अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने दे’खिएकाले मुम्बइले यसको अभाव हुन नदिन पूर्व’तयारी गरेको रहेछ । २) सिलिन्डरको साटो अस्पतालहरूमा पाइपबाट अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मि’लाइएछ । प्लान्ट र पाइ’पलाइनकाे मर्मत गरेर चु’हा’वट नियन्त्रण गरिएको रहेछ ।
३) विरामीलाई अक्सि’जन दिने बेलामा त्य’सबारे विशेष ज्ञान र अनुभव भएका नर्सलाई मात्र जिम्मेवा’री दिइएकाे रहेछ। अक्सिजन नर्सबाहेक अरूले बि’रामीलाई अ_क्सिजन दिने काम गरेनन् । ४) निजी अस्पतालसँग राम्रो सहकार्य एवं संयोजन गरिएको रहेछ । अक्सि’जन कति उत्पादन भएको छ, त्यसको वितरण कसरी भइराखेको छलगायत सबै कुरामा पारदर्शिता अपनाइएछ । उनीहरूलाई आवश्यक तालिम दिइएछ । ५) सबै अस्पतालहरूलाई २०% भन्दा बढी भण्डारण नगर्न भनेर अक्सिजन फिलिङ्, ढुवानी र आ’पूर्तिको का’मलाई चुस्त बनाइएको रहेछ । हामी पूर्वतयारीमा त चुकिसक्यौं । तर, अरू कुरामा मुम्बईकाे यो मोडलमा केहि गर्न सक्छौं कि ?
यो पनि,,,महावीर दाइ र आविष्कार केन्द्र टिमको जय जय होस्,सदैव सत्कर्मले शिखर चुमोस् भन्दै रबी लामीछानेले लेखे यस्तो,,,चर्चित सञ्चारकर्मी रबी लामिछाने काठमाडौं ।